Ashfall (2019) – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
လှနျခဲ့တဲ့လ အနညျးငယျကတညျးက Cast အငျအားတောငျ့တောငျ့နဲ့ ပရိသတျတှကွေား စိတျဝငျစားမှုခံခဲ့ရတဲ့ ကိုရီးယား ရုပျရှငျ Ashfall ထှကျရှိလာပါပွီ။ ကိုရီးယား Box Office မှာလညျး ကွညျ့ရှုသူ ၈သနျးကြျော သှားပွီလို့ သိရပါတယျ။ ဒီလို Cast အငျအားတောငျ့တောငျ့နဲ့ ရိုကျထားတဲ့ကားက ကောငျးကောငျးမကောငျးကောငျး ကွညျ့တဲ့သူရှိမှာပမေယျ့ ဒီလောကျထိ ကွညျ့ကွတာတော့ နညျးနညျး ရှိနျခငျြစရာပါပဲ။ Plot ကတော့ ကိုရီးယားနိုငျငံရဲ့ တောငျပိုငျးရော မွောကျပိုငျးရောကို ခွိမျးခွောကျလာတဲ့ ငလြှငျအပျေါမှာ အခွခေံထားပါတယျ။ မီးတောငျကွောငျ့ မမြှျောလငျ့ဘဲ ရုတျတရကျ မွတှေပွေို၊ တိုကျတှပွေိုရလောကျတဲ့7magnitude ကြျောတဲ့ ငလြှငျတဈခု လှုပျခတျရာကနေ ဇာတျလမျးစပါတယျ။ နောကျထပျလညျး ငလြှငျ သုံးကွိမျထပျလှုပျဦးမှာ ဖွဈပွီး နောကျဆုံးအခေါကျ လှုပျတဲ့ ငလြှငျကိုသာ မတားနိုငျရငျတော့ တောငျရော မွောကျရော ဘဝခါးသှားပါလိမျ့မယျ။ ဒါကွောငျ့မို့ နောကျဆုံး ငလငျြ ကို အခြိနျမီ တားနိုငျဖို့ Suicide Mission ထမျးဆောငျရပုံနဲ့ ဒီ Mission မှာ ပါဝငျပတျသတျတဲ့ သူတှကေို ရိုကျပွသှားတာပါ။ ဆိုတော့ဗြာ Review လေးစရအောငျ…
Plot က ရိုးတယျ။ Disaster ရုပျရှငျတိုငျး ဒီလို Plot မြိုးပဲ။ ဇာတျသိမျး ဘယျလိုဆိုတာတောငျ ပွောစရာမလိုပဲ ခနျ့မှနျးလို့ရတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဇာတျလမျးက အီမသှားဘဲ တောကျလြှောကျ ကွညျ့ရတာ တနျတယျ။ မထငျထားတဲ့အခြိနျဆို ဟာသတှနေဲ့ ထဖောကျတယျ။ အရမျး Serious ဖွဈပွနတောထကျစာရငျ ပရိသတျကို ခဏလှတျလှတျလပျလပျ အနားပေးတဲ့သဘောမြိုးလေးကွောငျ့ ဇာတျလမျးကို ကွညျ့ရတာ မပငျြးသှားဘူး။ နောကျတဈနညျးပွောရရငျ ဇာတျကို မသိမသာလေး ဆှဲဆနျ့သှားတယျပေါ့ဗြာ။ Drama လေးတှပေါ ထထခြိုးလိုကျသေးတယျ။ မိုကျပါတယျဗြာ။ တကယျကွညျ့ရတာ အဆငျပွပေါတယျ။ Cast က မွနျမာပရိသတျတှေ မစိမျးတဲ့သူတှပေါပဲ။ Iris ထဲက Lee Byun Hun၊ မကွာခငျမှာ Marvel မှာ မွငျရတော့မယျ့ ဖကျတီးမငျးသား Dong Lee၊ Along with the Gods ရဲ့ Ha Jung Wo၊ ယောကျြားလေး မိနျးကလေး အားလုံးရဲ့ အသညျးစှဲ Suzy တို့ အသီးသီး ပါဝငျထားပါတယျ။ အကျရှငျကား ကွိုကျတတျတဲ့သူတှေ၊ မွတှေကှေဲ တိုကျတှပွေိုတှကွေားကနေ အသကျလုပွေးရတာမြိုး ရငျတမမ ကွညျ့ရတဲ့သူတှေ အတှကျတော့ လကျမလှတျသငျ့ပါဘူးဗြ။ Lee Byung Hun ကတော့ Lee Byung Hun ပါပဲ။ ဒီဘဲကွီးက အသကျသာကွီးသှားတယျ အခုထိ ကွမျးနဆေဲပါပဲ။ ဒီဇာတျကားထဲမှာ မွောကျပိုငျးသား double agent Ri Jun Pyung အနနေဲ့ တှရေ့မှာပါ။ တကယျကို Keanu Reeves ကိုရီးယား ဗားရှငျးပါ။ တဈခုပါပဲ။ တဈခကျြတဈခကျြ လိုတာထကျပိုပွီး ကိုရီးယားကားဆနျကာ နညျးနညျး ပေါတောတော လုပျတာလေးကလှဲရငျ အဆငျပွပေါတယျ။
ဒါပမေယျ့လညျး ငလြှငျလှုပျပွီး အကုနျသမေလား ရှငျမလား ဖွဈနတေဲ့သူတှကေို အရမျး Serious ဖွဈပွရငျ အနညျးနဲ့ အမြား ပငျြးဖို့ကောငျးသှားမှာမို့ လုပျတတျတဲ့ပုံစံမို့ အပွဈလို့ ပွောရလောကျအောငျတော့ မဟုတျပါဘူး။ Ha Jung Wo ကတော့ တောငျပိုငျးက ဗုံး Specialist Cho In Chang ပါ။ မွောကျပိုငျးကို ဗုံး Specialist အနနေဲ့ ဖုံးဖယျဖို့ နြူးကလိယတှေ ကိုငျတှယျဖို့ သှားတာ ဖွဈပမေယျ့ အခွအေနေ တဈခုကွောငျ့ ကိုယျတိုငျ ရှကေ့နေ တိုကျဖို့ ဖွဈလာပါတယျ။ ဒီဇာတျကားမှာ Lee Byung Hun နဲ့ သူက အက်ခရာပါပဲ။ သူတို့နှဈယောကျက Hitman’s Bodyguard ထဲက Michael နဲ့ Daris နောကျပွီး Hobbs နဲ့ Shaw တို့လို တှဲလုံးပါ။ နညျးနညျးတော့ Serious ဖွဈတဲ့ ပုံစံမြိုးနဲ့ပေါ့ဗြာ။ Serious မဖွဈလို့လညျး မရဘူးလေ။ Captain Cho ကလညျး သူ့မိနျးမက ဗိုကျတဈလုံးနဲ့ ကနျြခဲ့တဲ့ ဒီ Mission ပွီးမှ အိမျပွနျရမှာ။ Mission ပွီးဖို့ကလညျး နောကျဆုံး ငလငျြကို တားပွီး အခကျအခဲတှကွေားကနေ ရှငျသနျနိုငျမှ။ Dong Lee နဲ့ Suzy တို့ကို အမြားကွီး မှနျးထားတဲ့ သူတှကေိုတော့ စိတျမကောငျးပါဘူး။ Dong Lee ကို ခါတိုငျးမွငျနကွေလို တိုကျခိုကျနတေဲ့ အကျရှငျမငျးသားပုံစံ မဟုတျဘဲ ခေါငျးခွောကျနတေဲ့ Scientist အနနေဲ့ တှရေ့မှာပါ။ Suzy ကတော့ Captain Cho ရဲ့ ကိုယျဝနျသညျ ဇနီး Ji Young ပါ။ သူကတော့ ဒီဇာတျလမျးမှာ ပါဝငျရတဲ့ ဇာတျဝငျခနျးနညျးလို လုပျကှကျလညျး သိပျမရှိပါဘူး။ ဘာပဲဖွဈဖွဈ သရုပျဆောငျတှဘေကျက တာဝနျကပြေါတယျ။ ကိုရီးယားရဲ့ A-list သရုပျဆောငျတှဆေိုတာ နှဈခါ ပွောနစေရာ မလိုပါဘူး။ အသံပိုငျးပိုငျးကိုလညျး ခြီးကြူးခငျြပါတယျ။ Disaster Movie ဖွဈတာမို့ တိုကျတှပွေို၊ မွတှေပွေို ဝုနျးဒိုငျး ဝုနျးဒိုငျး မနဘေူး။ တျောရုံသငျ့ရုံလောကျပဲ။ Accident ဖွဈလို့ နားအူသှားတဲ့ ပုံစံမြိုး ပွတာတောငျ အသံကွီးကို စူးနအေောငျ မထညျ့ပေးထားပါဘူး။ တဈဖကျမှာ Mission လုပျနတေဲ့ Captain Cho နဲ့ Agent Ri တို့ကို ပွတယျ နောကျတဈဖကျကလညျး အမရေိကနျသားကွီး Robert ကိုလညျး ပွတယျ။ Agent Ri ကလညျး သူ့အကွောငျးကို ပွခငျြသေးတယျ။ Spoiler-free မို့ တဈခွားဟာတှတေော့ ထညျ့မပွောတော့ပါဘူး။
အပွမြားသှားလို့ အစပိုငျးမှာ နညျးရှုပျနေ‌ပမေယျ့ နောကျပိုငျးမှာတော့ အဆငျပွသှေားပါတယျ။ ဒါလေးကလညျး အမှားကွီးလို့ ပွောလို့မရတဲ့ အမှားတဈခုပါပဲ။ ဆိုတော့ အဆုံးသတျအနှဈခြုပျရအောငျဗြာ။ Ashfall ကို ဘယျလိုလူတှေ ကွညျ့သငျ့လဲ..? သရုပျဆောငျတှကွေိုကျရငျလညျး ကွညျ့သငျ့ပါတယျ။ နောကျပွီး Action, Horror တှပေဲ ရုံတငျတာမြားတတျပွီး Disaster Movie တှကေို ရုံတှမှော ကွညျ့ရခဲတာမို့ Action/Thriller ကွိုကျတဲ့သူတှေ ရုံမှာ အမီကွညျ့သငျ့ပါတယျ။ CGI ကလညျး Hollywood ရုပျ‌‌ရှငျ‌တှနေီးနီး မလြော့ဘဲ သုံးထားတာတှရေ့ပါတယျ။ ဇာတျလမျးက ထိထိမိမိရှိပွီး ကွညျ့ပွီးရငျလညျး စှဲကနျြနမေယျ့ ဇာတျကားမြိုး ဖွဈပါတယျ။
လွန်ခဲ့တဲ့လ အနည်းငယ်ကတည်းက Cast အင်အားတောင့်တောင့်နဲ့ ပရိသတ်တွေကြား စိတ်ဝင်စားမှုခံခဲ့ရတဲ့ ကိုရီးယား ရုပ်ရှင် Ashfall ထွက်ရှိလာပါပြီ။ ကိုရီးယား Box Office မှာလည်း ကြည့်ရှုသူ ၈သန်းကျော် သွားပြီလို့ သိရပါတယ်။ ဒီလို Cast အင်အားတောင့်တောင့်နဲ့ ရိုက်ထားတဲ့ကားက ကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်း ကြည့်တဲ့သူရှိမှာပေမယ့် ဒီလောက်ထိ ကြည့်ကြတာတော့ နည်းနည်း ရှိန်ချင်စရာပါပဲ။ Plot ကတော့ ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ တောင်ပိုင်းရော မြောက်ပိုင်းရောကို ခြိမ်းခြောက်လာတဲ့ ငလျှင်အပေါ်မှာ အခြေခံထားပါတယ်။ မီးတောင်ကြောင့် မမျှော်လင့်ဘဲ ရုတ်တရက် မြေတွေပြို၊ တိုက်တွေပြိုရလောက်တဲ့7magnitude ကျော်တဲ့ ငလျှင်တစ်ခု လှုပ်ခတ်ရာကနေ ဇာတ်လမ်းစပါတယ်။ နောက်ထပ်လည်း ငလျှင် သုံးကြိမ်ထပ်လှုပ်ဦးမှာ ဖြစ်ပြီး နောက်ဆုံးအခေါက် လှုပ်တဲ့ ငလျှင်ကိုသာ မတားနိုင်ရင်တော့ တောင်ရော မြောက်ရော ဘဝခါးသွားပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်မို့ နောက်ဆုံး ငလျင် ကို အချိန်မီ တားနိုင်ဖို့ Suicide Mission ထမ်းဆောင်ရပုံနဲ့ ဒီ Mission မှာ ပါဝင်ပတ်သတ်တဲ့ သူတွေကို ရိုက်ပြသွားတာပါ။ ဆိုတော့ဗျာ Review လေးစရအောင်…
Plot က ရိုးတယ်။ Disaster ရုပ်ရှင်တိုင်း ဒီလို Plot မျိုးပဲ။ ဇာတ်သိမ်း ဘယ်လိုဆိုတာတောင် ပြောစရာမလိုပဲ ခန့်မှန်းလို့ရတယ်။ ဒါပေမယ့် ဇာတ်လမ်းက အီမသွားဘဲ တောက်လျှောက် ကြည့်ရတာ တန်တယ်။ မထင်ထားတဲ့အချိန်ဆို ဟာသတွေနဲ့ ထဖောက်တယ်။ အရမ်း Serious ဖြစ်ပြနေတာထက်စာရင် ပရိသတ်ကို ခဏလွတ်လွတ်လပ်လပ် အနားပေးတဲ့သဘောမျိုးလေးကြောင့် ဇာတ်လမ်းကို ကြည့်ရတာ မပျင်းသွားဘူး။ နောက်တစ်နည်းပြောရရင် ဇာတ်ကို မသိမသာလေး ဆွဲဆန့်သွားတယ်ပေါ့ဗျာ။ Drama လေးတွေပါ ထထချိုးလိုက်သေးတယ်။ မိုက်ပါတယ်ဗျာ။ တကယ်ကြည့်ရတာ အဆင်ပြေပါတယ်။ Cast က မြန်မာပရိသတ်တွေ မစိမ်းတဲ့သူတွေပါပဲ။ Iris ထဲက Lee Byun Hun၊ မကြာခင်မှာ Marvel မှာ မြင်ရတော့မယ့် ဖက်တီးမင်းသား Dong Lee၊ Along with the Gods ရဲ့ Ha Jung Wo၊ ယောက်ျားလေး မိန်းကလေး အားလုံးရဲ့ အသည်းစွဲ Suzy တို့ အသီးသီး ပါဝင်ထားပါတယ်။ အက်ရှင်ကား ကြိုက်တတ်တဲ့သူတွေ၊ မြေတွေကွဲ တိုက်တွေပြိုတွေကြားကနေ အသက်လုပြေးရတာမျိုး ရင်တမမ ကြည့်ရတဲ့သူတွေ အတွက်တော့ လက်မလွှတ်သင့်ပါဘူးဗျ။ Lee Byung Hun ကတော့ Lee Byung Hun ပါပဲ။ ဒီဘဲကြီးက အသက်သာကြီးသွားတယ် အခုထိ ကြမ်းနေဆဲပါပဲ။ ဒီဇာတ်ကားထဲမှာ မြောက်ပိုင်းသား double agent Ri Jun Pyung အနေနဲ့ တွေ့ရမှာပါ။ တကယ်ကို Keanu Reeves ကိုရီးယား ဗားရှင်းပါ။ တစ်ခုပါပဲ။ တစ်ချက်တစ်ချက် လိုတာထက်ပိုပြီး ကိုရီးယားကားဆန်ကာ နည်းနည်း ပေါတောတော လုပ်တာလေးကလွဲရင် အဆင်ပြေပါတယ်။
ဒါပေမယ့်လည်း ငလျှင်လှုပ်ပြီး အကုန်သေမလား ရှင်မလား ဖြစ်နေတဲ့သူတွေကို အရမ်း Serious ဖြစ်ပြရင် အနည်းနဲ့ အများ ပျင်းဖို့ကောင်းသွားမှာမို့ လုပ်တတ်တဲ့ပုံစံမို့ အပြစ်လို့ ပြောရလောက်အောင်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ Ha Jung Wo ကတော့ တောင်ပိုင်းက ဗုံး Specialist Cho In Chang ပါ။ မြောက်ပိုင်းကို ဗုံး Specialist အနေနဲ့ ဖုံးဖယ်ဖို့ နျူးကလိယတွေ ကိုင်တွယ်ဖို့ သွားတာ ဖြစ်ပေမယ့် အခြေအနေ တစ်ခုကြောင့် ကိုယ်တိုင် ရှေ့ကနေ တိုက်ဖို့ ဖြစ်လာပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားမှာ Lee Byung Hun နဲ့ သူက အက္ခရာပါပဲ။ သူတို့နှစ်ယောက်က Hitman’s Bodyguard ထဲက Michael နဲ့ Daris နောက်ပြီး Hobbs နဲ့ Shaw တို့လို တွဲလုံးပါ။ နည်းနည်းတော့ Serious ဖြစ်တဲ့ ပုံစံမျိုးနဲ့ပေါ့ဗျာ။ Serious မဖြစ်လို့လည်း မရဘူးလေ။ Captain Cho ကလည်း သူ့မိန်းမက ဗိုက်တစ်လုံးနဲ့ ကျန်ခဲ့တဲ့ ဒီ Mission ပြီးမှ အိမ်ပြန်ရမှာ။ Mission ပြီးဖို့ကလည်း နောက်ဆုံး ငလျင်ကို တားပြီး အခက်အခဲတွေကြားကနေ ရှင်သန်နိုင်မှ။ Dong Lee နဲ့ Suzy တို့ကို အများကြီး မှန်းထားတဲ့ သူတွေကိုတော့ စိတ်မကောင်းပါဘူး။ Dong Lee ကို ခါတိုင်းမြင်နေကြလို တိုက်ခိုက်နေတဲ့ အက်ရှင်မင်းသားပုံစံ မဟုတ်ဘဲ ခေါင်းခြောက်နေတဲ့ Scientist အနေနဲ့ တွေ့ရမှာပါ။ Suzy ကတော့ Captain Cho ရဲ့ ကိုယ်ဝန်သည် ဇနီး Ji Young ပါ။ သူကတော့ ဒီဇာတ်လမ်းမှာ ပါဝင်ရတဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်းနည်းလို လုပ်ကွက်လည်း သိပ်မရှိပါဘူး။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သရုပ်ဆောင်တွေဘက်က တာဝန်ကျေပါတယ်။ ကိုရီးယားရဲ့ A-list သရုပ်ဆောင်တွေဆိုတာ နှစ်ခါ ပြောနေစရာ မလိုပါဘူး။ အသံပိုင်းပိုင်းကိုလည်း ချီးကျူးချင်ပါတယ်။ Disaster Movie ဖြစ်တာမို့ တိုက်တွေပြို၊ မြေတွေပြို ဝုန်းဒိုင်း ဝုန်းဒိုင်း မနေဘူး။ တော်ရုံသင့်ရုံလောက်ပဲ။ Accident ဖြစ်လို့ နားအူသွားတဲ့ ပုံစံမျိုး ပြတာတောင် အသံကြီးကို စူးနေအောင် မထည့်ပေးထားပါဘူး။ တစ်ဖက်မှာ Mission လုပ်နေတဲ့ Captain Cho နဲ့ Agent Ri တို့ကို ပြတယ် နောက်တစ်ဖက်ကလည်း အမေရိကန်သားကြီး Robert ကိုလည်း ပြတယ်။ Agent Ri ကလည်း သူ့အကြောင်းကို ပြချင်သေးတယ်။ Spoiler-free မို့ တစ်ခြားဟာတွေတော့ ထည့်မပြောတော့ပါဘူး။
အပြများသွားလို့ အစပိုင်းမှာ နည်းရှုပ်နေ‌ပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာတော့ အဆင်ပြေသွားပါတယ်။ ဒါလေးကလည်း အမှားကြီးလို့ ပြောလို့မရတဲ့ အမှားတစ်ခုပါပဲ။ ဆိုတော့ အဆုံးသတ်အနှစ်ချုပ်ရအောင်ဗျာ။ Ashfall ကို ဘယ်လိုလူတွေ ကြည့်သင့်လဲ..? သရုပ်ဆောင်တွေကြိုက်ရင်လည်း ကြည့်သင့်ပါတယ်။ နောက်ပြီး Action, Horror တွေပဲ ရုံတင်တာများတတ်ပြီး Disaster Movie တွေကို ရုံတွေမှာ ကြည့်ရခဲတာမို့ Action/Thriller ကြိုက်တဲ့သူတွေ ရုံမှာ အမီကြည့်သင့်ပါတယ်။ CGI ကလည်း Hollywood ရုပ်‌‌ရှင်‌တွေနီးနီး မလျော့ဘဲ သုံးထားတာတွေ့ရပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းက ထိထိမိမိရှိပြီး ကြည့်ပြီးရင်လည်း စွဲကျန်နေမယ့် ဇာတ်ကားမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။
Option3uptomega.com 605 MB SD (480p)
Option4usersdrive.com 605 MB SD (480p)
Option5yuudrive.me 605 MB SD (480p)
Option6sharer.pw 605 MB SD (480p)
Option 10 usersdrive.com 1.4 GB HD (1080p)
Option 11 yuudrive.me 1.4 GB HD (1080p)
Option 12 sharer.pw 1.4 GB HD (1080p)
Option 13 storage.msubmovie.com 3.6 GB FHD (1080p) DTS 5.1
Option 14 megaup.net 3.6 GB FHD (1080p) DTS 5.1
Option 15 yuudrive.me 3.6 GB FHD (1080p) DTS 5.1
Option 16 sharer.pw 3.6 GB FHD (1080p) DTS 5.1
Option 17 usersdrive.com 3.6 GB FHD (1080p) DTS 5.1